20ka Shaqo ee ugu Mushaarka badan Tamarta | 2022 | Shaqooyinka Kiiky Wealth
Bogga ugu weyn 20 Shaqooyinka Ugu Lacag Badan Tamarta | 2022
Shaqooyinka tamarta ayaa ka mid ah shaqooyinka ugu mushaharka badan adduunka maanta oo leh koboc aad u sarreeya. Way adag tahay in la qiyaaso adduun aan tamar lahayn (kiimiko, qorrax, farsamo, iyo wixii la mid ah). Waxaan u baahanahay tamartaan si aan u noolaano sidaa darteed waxaa jira baahi aad u saraysa isticmaalkooda.
Maqaalkan, waxaan ku baran doonnaa qaybta tamarta guud ahaan, shaqooyinka tamarta ugu fiican, iyo 20ka ugu sarreeya shaqooyinka tamarta ee mushaharkoodu sarreeyo.
Xirfadda qaybta tamarta miyey tahay mid wanaagsan?
Haa way tahay. Adduun aan tamar lahayn waa fikir aan macquul ahayn. Horumarka teknolojiyadda awgeed, waxay lagama maarmaan u tahay dhinac kasta oo nolosheenna casriga ah ah.
Fursadaha horumarinta xirfadda tamarta waa mid aan xad lahayn.
Tamarta waa fikrad dhisan, si fiican loo bixiyay iyo, wax walba oo ka sarreeya, oo ah goob xirfadeed oo si joogto ah u koraya una kobcaysa.
Injineerada tamarta ayaa ah xirfadlayaasha sharafta leh ee mas'uul ka ah helitaanka ilaha tamarta cusub, ka faa'iideysiga, iyo u beddelidda sixirka ka soo baxa ilaha korontada ee gurigaaga ee awoodda iPhone -kaaga.
Sida goobaha injineernimada intooda badan, ka shaqaynta qaybta tamarta waxay xanbaarsan tahay mas'uuliyado kala duwan iyadoo diiradda la saarayo laba hadaf oo waaweyn: abuurista iyo horumarinta habab cusub oo lagu soo saaro tamar nadiif ah oo hufan iyo dhimista isticmaalka korontada.
Waaxda tamarta waa inay noqotaa mid xallisa dhibaatooyinka weyn oo khabiir ku ah hagaajinta hababka shaqada.
Tamarta waa goob farsamo oo takhasus gaar ah leh oo badanaa u baahan shahaadada jaamacadda. Waxaa jira waxyaalo ka reeban. Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah hay'adaha waxbarashada ayaa bixiya barnaamijyo tamar oo u oggolaanaya ardayda inay ku hormaraan goobta tamarta iyagoo aan lahayn shahaadooyin heer sare ah.
Waa maxay xirfadaha ku jira Tamarta?
Waxaa jira fursado shaqo oo badan oo ka jira waaxda Tamarta. Qaar ka mid ah waa:
Architects: Waxay naqshadeeyaan oo qorsheeyaan dhismayaasha dhismayaasha.
Hawl -wadeennada Qalabka Kiimikada: Waxay ku shaqeeyaan qalabkaas xakameeya falcelinta kiimikada inta wax -soo -saarka.
Dhirta kiimikada iyo hawlwadeenada nidaamyada: Waxay maamulaan dhirta iyo mashiinada loo isticmaalo habka kiimikaad oo dhan.
Injineerada madaniga ah: Waxay naqshadeeyaan oo qorsheeyaan mashaariicda waaweyn ee dhismaha iyagoo adeegsanaya injineernimada.
Kormeerayaasha dhismaha iyo dhismaha: Waxay kormeeraan dhismayaasha iyo dhismayaasha si ay u hubiyaan in injineerada ay raacaan qorshaha.
Maamulayaasha dhismaha: Waxay kormeeraan habka dhismaha.
Xakameeyayaasha iyo hagaajiyayaasha waalka iyo rakibayaasha: Waxay dayactiraan qaybaha dhismaha.
Dayactirayaasha Korantada iyo Elektiroonigga ee Qalabka Ganacsiga iyo Warshadaha: dayactir iyo rakibidda aaladaha elektiroonigga ah.
Farsamayaqaannada Injineerinka Korontada iyo Elektrooniga: Nakhshadeynta iyo dayactirka aaladaha elektiroonigga ah. Ka hoos shaqeeya injineerada.
Farsamayaqaannada Adeegga Marawaxadaha Dabaysha: dayactir iyo hubinta marawaxadaha dabaysha
Rakibayaasha Photovoltaic Solar: ku rakib nidaamyada PV qoraxda saqafyada ama ku dheji dhulka.
Xirfadaha aan kor ku soo sheegnay waa dhowr ka mid ah fursadaha badan ee aan haysano. Qaybta tamarta waxay leedahay fursado badan oo lagu sahamiyo.
Shaqooyinka tamarta la cusboonaysiin karaa si fiican ma u bixiyaan?
Iyada oo kor u kacday qiimaha shidaalka iyo gaaska, tamarta la cusboonaysiin karo ayaa si tartiib tartiib ah u noqonaysa ilaha tamarta koowaad. Shaqooyinka la cusboonaysiin karo si fiican ma u bixiyaan? Dabcan, way sameeyaan.
Warshadaha ayaa la qarxinaya mashaariicda dawladda iyo natiijooyinka shakhsi ahaaneed. Injineer ahaan, waxaad heli kartaa ku dhawaad ​​$70,000. Rakibayaasha marawaxadaha dabayshu waxay kasbadaan lacag badan iyadoo ku xidhan khibradooda.
Tamarta la cusboonaysiin karo, waxaa jirta badbaado shaqo maadaama warshaduhu ay sii weynaan karaan oo keliya. Tamarta la cusboonaysiin karo hadda aad bay u weyn tahay waana in la tixgeliyaa marka qofku dooranayo xirfaddiisa.
Intee in le'eg ayuu qofku ku kasban karaa xirfad xagga tamarta ah?
Inta aad shaqaysato waxay ku xidhan tahay shaqadaada qaybta tamarta. Sida kor ku xusan, injineerku wuxuu heli karaa ku dhawaad ​​$ 70,000. Injineerada korantada waxay kasbadaan $76,092 (AUD) sanadkii marka loo eego PayScale. Waxay samayn karaan $52,634 sannadkii iyo $124,266 sannadkii iyadoo ku xidhan takhasuskooda iyo waayo-aragnimadooda.
Celceliska mushaharka dhismaha waa $ 62,992 (AUD) sanadkii. Waxay u dhaxaysaa $ 48,694 pa ilaa $ 93,728 sanadkii. Mushaharkoodu wuxuu ku xiran yahay khibrad. Marka loo eego Payscale, saraakiisha deegaanka ayaa sameeya $ 68,397 (AUD) sanadkii. Mushaharku wuxuu u dhexayn karaa $ 48,377 illaa $ 90,817 sanadkii.
Mushaharka laga helo goobta tamarta way ku kala duwan yihiin xirfadda ilaa xirfadda laakiin, waxay noqon karaan kuwo aad u weyn. Filo koror macquul ah maaddaama warshadaha ay sii weynaanayaan.
Waa maxay shaqooyinka ugu fiican ee tamarta la cusboonaysiin karo?
Shaqooyinka ugu fiican ee tamarta la cusboonaysiin karo waxaa lagu go'aamiyaa mushaharkooda iyo amniga shaqada. Qaar ka mid ah waxaa ka mid ah:
Rakibayaasha Dabaysha-Turbine: 2029-ka, farsamayaqaannadan ayaa la filayaa inay arkaan 60.9% heerka kobaca shaqada iyo mushaharkooda oo la kordhiyo, dabcan. Tani waxay bixisaa xasilloonida iyo amniga shaqada.
Ku rakibayaasha nidaamka PV cadceedda: Waxaa la filayaa inay arkaan heerka kobaca 50.8% ee 2029. Heerka kobaca shaqadu wuu dhaqan galayaa iyadoo dad badani ay ku beddelanayaan shidaal fosil iyo gaas qoraxda.
Hawl wadeennada adeegga (saliidda, gaaska, iyo macdanta): Shaqaalahan ayaa la filayaa inay arkaan 22.9% heerka kobaca shaqada ka hor 2029.
Soosaarayaasha softiweerka: Soosaarayaashaani waxay naqshadeeyaan oo tijaabiyaan softiweerka nidaamka hawlgalka. Waxaa la filayaa inay arkaan 21.5% heerka kobaca shaqada marka la gaaro 2029 kaas oo durba bilaabay inuu dhaqangalo.
Makaanikada mashiinada warshadaha: Farsamoyaqaanada mishiinka warshadaha, shaqaalaynta ayaa la filayaa inay korodho 15.6% marka la gaadho 2029.
XIDHIIDHKA: 15-ka Waaxood ee ugu Mushaarka Badan | 2022
20 shaqooyinka ugu mushaarka badan tamarta sanadka 2022
Miyaad la yaaban tahay shaqooyinka ugu mushaharka badan tamarta? Ha welwelin. Waan ku helnay Halkan fiiri 20ka ugu sarreeya shaqooyinka tamarta ugu mushaarka badan.
1. Injineer madaniga ah
In kasta oo aysan ahayn ikhtiyaarka kaliya, qaar ka mid ah injineerada madaniga ah waxay diirada saaraan xirfadahooda tamarta la cusboonaysiin karo iyo dhismayaasha cagaaran.
Doorarkan, injineerada madaniga ah waxay ka caawinayaan qorsheynta, naqshadeynta, iyo kormeerka, waxayna hubiyaan in mashaariicda ay horay u socdaan.
Si aad u noqoto injineer madaniga ah, waa inaad haysataa shahaadada bachelorka. Markaad hesho, waxaad samayn kartaa qiyaastii $ 87,060 sanadkii. Si kastaba ha noqotee, qaarkood waxay helaan wax ka badan $ 144,560.
2. Rakiyeha PV cadceedda
Haddii aad raadinayso shaqooyin deegaan oo heer-gal ah oo aad u weyn oo aad diyaar u tahay inaad samayso qaadista culus, noqoshada rakibaha qorraxda PV ayaa noqon kara xulashadaada ugu fiican.
Xirfadlayaashan waxay dhismayaasha ku rakibaan leyrarka cadceeda iyo aalado kale si ay iftiinka qorraxda ugu beddelaan koronto la isticmaali karo.
Si ka duwan inta badan shaqooyinka liiskan ku jira, shaqadani uma baahna shahaadada kulliyadda; Taa baddalkeeda, tababarka shaqada ama tababarka xirfadaha ayaa inta badan ku filnaan kara. Waxaad samayn doontaa qiyaastii $ 44,890 sanadkii.
3. La -taliyaha Tamarta Cusboonaysiinta
Mid ka mid ah shaqooyinka ugu mushaharka badan warshadaha tamarta ayaa ku lug leh la-talinta macaamiisha sida loo helo nidaamka dib-u-cusboonaysiinta ugu habboon ee guryahooda ama ganacsigooda. tamarta la cusboonaysiin karo ee casriga ah sida la -taliyaha tamarta la cusboonaysiin karo.
Adigoo ah lataliye tamarta la cusboonaysiin karo, waxaad leedahay mid ka mid ah shaqooyinka ugu mushaharka badan warshadaha oo leh celcelis mushahar sanadle ah $ 66,015. Shahaadada bachelor -ka waa inay ahaato mid ku filan si aad uga bilowdo arimahan.
4. Falanqaynta Maaliyadda
Adigoo ah falanqeeye maaliyadeed, waxaad u shaqayn kartaa shirkadaha tamarta la cusboonaysiin karo oo aad mas'uul ka tahay waaxda maaliyadda, dabagalka kharashka tamarta, mushaharka shaqaalaha, iyo wax ka qabashada arrimaha maaliyadeed ee mustaqbalka.
Xirfaddooda sida falanqeeyayaasha maaliyadeed waxay ka caawin karaan shirkadda inay horumariso wax soo saarka tamarta saxda ah ee aagga saxda ah, inay gaaraan go'aanno ballaarineed oo xog -ogaal ah, iyo inay hubiyaan in wax walba la sameeyo si sare loogu qaado faa'iidada.
Falanqeeyayaasha maaliyadeed ee shirkadda tamarta ayaa ka mid ah kuwa ugu mushaharka badan warshadaha, oo celcelis ahaan mushaharkoodu yahay $ 85,439.
5. Maareeyaha Goobta Beerta Dabaysha
Adiga ayaa mas'uul ka ah kormeerka ururinta tamarta dabaysha iyo goobta beerta dabaysha oo ah maamulaha goobta beerta dabaysha ama injineer.
Waxaad sidoo kale mas'uul ka tahay kormeerka shaqaalaha loo xilsaaray goobahan beer -dabeysha maadaama xirfadaha hoggaaminta ee aadka u wanaagsan looga baahan yahay jagadan.
Maareeyayaasha beerta dabaysha ama injineerada waa inay hubiyaan in tamarta korontada laga dhaliyo awoodda dabaysha iyadoo la ilaalinayo badbaadada iyo daacadnimada qalabka beerta dabaysha.
Iyada oo leh mushahar caadi ah $ 110,630, waa mid ka mid ah shaqooyinka ugu mushaarka badan warshadaha tamarta.
6. Engineerka Batroolka
Iyada oo celcelis ahaan mushaharkeedu yahay $ 137,720, Injineerinka Batroolka ayaa ka mid ah shaqooyinka ugu mushaarka badan qaybta tamarta, injineeradaasna maanta ayaa looga baahan yahay si ka badan sidii hore.
Injineeradaani waxay ka caawiyaan warshadaha saliidda iyo gaaska inay helaan oo isticmaalaan khayraadka saliidda, oo ay ku jiraan naqshadaynta, dhisidda, iyo dhisidda habab wax -ku -ool ah oo loo soo saaro, loo sifeeyo, ama loo ogaado kheyraadka saliidda iyo gaaska cusub.
Waa inaad haysataa ugu yaraan shahaadada batroolka si aad uga mid noqoto xirfaddan oo waxaad dooran kartaa inaad ka shaqayso xafiiska ama goobta kormeerida wax soo saarka saliidda iyo sifaynta.
7. Farsamo -yaqaan Degaanka
Maaddaama ay tahay mid ka mid ah shaqooyinka ugu mushaharka badan qaybta tamarta, Farsamayaqaanka Deegaanka ayaa kaalin muhiim ah ka qaata waaxda tamarta isaga oo horumarinaya hababka casriga ah ee lagula dagaallamayo wasakhda iyo ilaalinta deegaanka si aad ah ammaan ah. Iyo in la xoojiyo xeerarka iyo qawaaniinta ay tahay in ganacsiyada iyo dadweynuhu u hoggaansamaan si loo ilaaliyo deegaanka.
Farsamo -yaqaan injineernimada deegaanka, waxaad naqshadeyn kartaa siyaabo ama xitaa mashiinno bey'adda u wanaagsan si loo yareeyo ama loo tirtiro waxyeellada ay mararka qaar dhalin karto korontadu.
Si aad u noqoto xirfaddan, waxaad u baahan tahay shahaadada bachelorka. Celceliska mushaharka waa $ 50,620.
8. Injineer / Maareeye
Iyada oo celcelis ahaan mushaharkeedu yahay $ 144,830 sanadkii, injineer dhisme ama maamule ayaa ka mid ah shaqooyinka ugu mushaarka badan qaybta tamarta.
Shaqada xirfadlayaashan ayaa ah in ay naqshadeeyaan oo ay dhisaan dhismayaal tamar wanaagsan leh kuwaas oo isticmaala tamar yar iyo kheyraad yar, yaraynta qashinka.
Shaqooyinkooda waxaa kale oo ka mid ah qorsheynta faahfaahsan, maareynta cilmi -baarista, iyo saxnaanta farsamo, kuwaas oo dhammaantood loogu talagalay yareynta isticmaalka tamarta. Shahaadada bachelor -ka ee injineernimada dhismaha ayaa kuu horseedi karta xirfadan.
9. Hawl wadeenka warshadda korontada
Warshadaha korontada ayaa loo adeegsadaa inay ururiyaan, abuuraan oo u qaybiyaan tamarta macaamiisha. Si loo hubiyo hawlgal hufan, nidaamyadani waxay u baahan yihiin hawl -wadeenno khibrad leh.
Hawl-wadeennada warshadda korontadu waa inay ku shaqeeyaan oo ay ilaaliyaan nidaamyada tamarta korontada iyo qaybinta.
Hal shay oo qabow oo ku saabsan xulashada mihnaddan ayaa ah inaad ka shaqayn karto kuwa la cusboonaysiin karo (qorraxda, dhulka, iwm), kuwa aan dib loo cusboonaysiin karin (saliid, gaas, biyo), ama xitaa qaybaha tamarta kale (nukliyeerka).
Waxay kasbadaan qiyaastii $ 85,950 sanad walba
10. Maareeyaha mashruuca
Maareynta mashruuca ma aha xirfad gaar ah oo ku jirta warshadaha tamarta. Iyada oo ay jiraan mashaariic badan oo ka jira warshadaha, si kastaba ha ahaatee, maamulaha mashruuca waa hanti muhiim ah.
Waxaad mas'uul ka noqon doontaa qorsheynta iyo fulinta mashaariicda tamarta sida dhisidda dhirta, rakibidda nidaamyada qaybinta, iwm.
Maareynta mashruucu waa mid ka mid ah shaqooyinka ugu mushaharka badan meesha tamarta la cusboonaysiin karo, oo celcelis ahaan mushaharkeedu yahay $ 66,000 sanadkii. Si kastaba ha noqotee, kuwa ugu sarreeya ee ka shaqeeya warshadaha ayaa sameeya wax ka badan $ 100,000 sanadkii.
11. Cilmi -baadhe
Khabiir ku xeel dheer cilmiga dhulka ayaa mas'uul ka ah barashada sifooyinka muuqaalka dhulka.
Maadaama ilaha tamarta badan ay u baahan yihiin in dhulka laga soo saaro, khubarada cilmiga dhulka ayaa ka mid ah khubarada aadka loo raadinayo ee warshadaha tamarta.
Khabiirada cilmiga dhulka ayaa muhiim u ah daahfurka iyo soo saarista saliidda iyo gaaska. Waxa kale oo aad ka shaqayn kartaa dhinaca tamarta la cusboonaysiin karo, tusaale ahaan sahaminta dhulka.
Khabiirka cilmiga dhulka ayaa ka mid ah shaqooyinka ugu mushaharka badan warshadaha tamarta xagga mushaharka. Waxaad filan kartaa inaad meel kasta ka samayso $ 50,000 ilaa $ 110,000, ama ka badan, iyadoo ku xidhan khibradaada.
12. Farsamayaasha Tamarta Qorraxda
Farsamayaqaannada tamarta qorraxda ayaa kormeera dayactirka nidaamyada qorraxda.
Ka dib marka la rakibo nidaamka tamarta qoraxda, farsamayaqaannada tamarta qorraxda ayaa inta badan daryeela dayactirka nidaamyadan.
Tani waa mid ka mid ah shaqooyinka tamarta ugu mushaarka badan adduunka oo dhan. Farsamayaqaannada tamarta qorraxda ayaa sida caadiga ah ka shaqeeya goobta si ay u xalliyaan dhibaatooyinka nidaamka tamarta qoraxda oo ay dayactir joogto ah ku sameeyaan nidaamyadaas.
Marka tamarta qorraxda ay caan ku noqoto, howlaha farsamayaqaannada tamarta qorraxda ayaa sii noqonaya kuwo aad loo dalbado. Mushaharkooda celcelis ahaan waa $ 52,559.
13. Farsama yaasha deegaanka
Farsama yaasha deegaanka ayaa kaalin muhiim ah ka qaata waaxda tamarta si loo horumariyo habab cusub oo meesha looga saaro wasakhda. si loo yareeyo waxyeellada ay dhalinta korontadu mararka qaarkood samayn karto, laakiin waxay kaloo gacan ka geystaan ​​abuurista iyo hirgelinta xeerar kala duwan si loo hubiyo in shirkadaha tamarta aysan ku saarin cadaadis ama dhibaato aan loo baahnayn deegaankooda.
Xirfaddani badanaa waxay u baahan tahay shahaadada bachelorka. Injineerada deegaanka ayaa ah tallaabooyin ilaalin oo muhiim u ah dabeecaddayada waxayna gacan ka geystaan ​​hubinta in qaybta tamarta ay si ammaan ah oo hufan u shaqeyso. Celceliska mushaharka waa $ 50,620
14. Qiimeeyaha Goobta
Qiimeeyaha goobta ayaa aad muhiim ugu ah ganacsiga tamarta, waana sababtaas sababta ay uga mid tahay xirfadaha tamarta ugu mushaarka badan.
Qiimeeyayaasha goobtu waxay sameeyeen booqashooyin goobta ah oo ay ku tageen goobaha suurtagalka ah ee korontadu.
Waxay adeegsadaan xirfadahooda gaarka ah si ay u go'aamiyaan in goob gaar ah ay ku habboon tahay shirkadda tamarta si ay u maalgeliso kheyraadkeeda.
Qiimeeyayaasha goobtu waxay sida caadiga ah u baahan yihiin shahaado ama shahaadada koowaad ee xirfadda noocan ah. Celceliska mushaharka waa $ 69,778
Celceliska mushaharka shaqadan waa $70,195. Warshadaha saliidda iyo gaaska waa shaqo-bixiye weyn oo loogu talagalay farmashiyeyaasha xirfadahooda waxay caawiyaan horumarinta iyo soo saarista shidaalka iyo saliidaha gaarka ah.
XIDHIIDHKA: 15 Tiknooloojiyadda Qalliinka ee ugu Lacag Badan | Gobolka ugu Fiican
Si kastaba ha ahaatee, tamarta kale iyo tan la cusboonaysiin karo waxay u baahan yihiin xirfado isku mid ah si loo horumariyo noolaha cusub.
Marka laga eego dhinaca waxbarashada, codsadayaashu waxay u badan tahay inay sidoo kale u baahan doonaan shahaadada mastarka ee kiimikada si ay u galaan booska gelitaanka xirfadda.
16. Farsamayaasha Adeegga marawaxadaha dabaysha
Mushaharka Dhexdhexaadku waa $ 54,370. Iyada oo ay sii kordhayaan tirada rakibidda marawaxadaha dabaysha, ma aha wax lala yaabo in shirkadaha tamarta la cusboonaysiin karo ay filayaan ku dhawaad ​​100% koboc farsamo -yaqaannada adeegga ah.
Shaqadani waxay u baahan tahay shaqaale xirfad leh oo khibrad u leh dhismaha, alxanka, iyo rakibidda korontada si loo rakibo beeraha dabaysha cusub loona dayactiro kuwa hadda jira.
17. Wakiilada Iibka
Celceliska mushaharka shaqadan waa $ 53,804. Waxa dadka badankiisa la yaaba waa sida farsamada shaqada iibka ee warshadaha tamarta la cusboonaysiin karo ay tahay.
Loo -shaqeeyayaasha badankoodu ma raadsadaan xirfadaha iibka oo keliya ee waxay kaloo raadiyaan awoodda ay u leeyihiin inay qiimeeyaan qalabka jira, si buuxda u falanqeeyaan shuruudaha macmiilka, oo ay noqdaan isku xirka macaamiisha, rakibayaasha, iyo adeegyada.
Xirfadaha iibka ee la xaqiijiyay ee kooxaha farsamada aadka u sarreeya ayaa waajib ku ah shaqadan.
Akhri: 10ka Injineer Ee Ugu Lacagaha Badan Software-ka Aduunka | 2022
18. Farsamada Ilaalinta Deegaanka & Sayniska
Celceliska mushaharka shaqadan waa $46,170. Shaqooyinkan waxaa ka mid ah shaqooyinka goobta iyo shaybaadhka si loo hubiyo in qalabka dib loo cusboonaysiin karo iyo kuwa tamarta dhalinaya aanu sababin waxyeello deegaan oo aan la qorshayn.
Waxa kale oo ay ku lug yeelan doontaa la socodka dhammaan noocyada wasakhowga si loo qiimeeyo saamaynta caafimaadka shaqaalaha iyo guud ahaan dadweynaha. Tani waxay u badan tahay inay tahay mid ka mid ah shaqooyinka tamarta dib loo cusboonaysiin karo ee aad heli karto.
Shahaadada injineernimada deegaanka ayaa ah waxa ugu yar ee looga baahan yahay tababarka.
19. Hawl wadeennada warshadda korontada
Hawl -wadeennada warshadda korontada ayaa mas'uul ka ah nidaamyada dhalinta iyo qaybinta korontada. Iyada oo ku xidhan ilaha dhalinta korontada, kuwani waxay noqon karaan shaqooyinka tamarta la cusboonaysiin karo, inkasta oo aanay wada ahayn.
Tababar yar oo dheeri ah, waxaa suurtogal ah in sanadkiiba la kasbado qiyaastii $ 85,950 sida hawlwadeen warshad koronto. Waxay xitaa dhaafi kartaa $ 117,130 waqti ka dib, taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah shaqooyinka tamarta ugu mushaarka badan ee aan u baahnayn shahaadada bachelorka.
20. Khabiirka Iibsiga Dhulka
Haddii aad hiigsanayso xirfad deegaan aan cilmi ahayn, boos ahaan sida Khabiirka Soo-iibinta Dhulka ayaa kugu habboon.
Xirfadlayaashani waxay naqshadeeyaan oo hirgeliyaan qorshayaasha goobaha tamarta dabaysha, helaan oggolaanshaha dhismaha ee la xiriira horumarinta waxayna fududeeyaan iibsashada ama kiraynta dhulka.
Shahaadada bachelor -ka ayaa looga baahan yahay inay u socoto jihadaas. Tani waxay sida caadiga ah ka dhigtaa takhasus lahaanshaha dhulka qiyaastii $ 63,715 sanadkii.
5ka ugu sarreeya ee la isweydiiyo ee ku saabsan shaqooyinka Tamarta
Hadda oo aad baratay shaqooyinka ugu mushaharka badan Tamarta, waa inaad haysataa su'aalo badan oo maskaxdaada ku soo dhacaya. Waxaan rajeyneynaa, inaan qaar uga jawaabi karno 5ta FAQ ee ugu sarreeya ee dadku wax ka weydiiyaan shaqooyinka tamarta.
Sidee bay muhiim u yihiin shaqooyinka tamarta?
In ka badan laba milyan oo Mareykan ah ayaa ka shaqeeya waaxda tamarta, warshado abuuray shaqooyin ku filan 2022. Waa mashiinka horumarinta dhaqaalaha oo u heellan abuurista iyo dhisidda mustaqbal wanaagsan oo caafimaad qaba.
Sidee tirada shaqooyinka tamarta loo barbardhigaa warshadaha kale?
Sanadka 2019, hufnaanta tamarta waxay shaqaaleysiisay ku dhawaad ​​1 50kii qof ee Mareykanka ah, in ka badan dhammaan macallimiinta dugsiyada hoose ee Mareykanka iyo inta ugu badan
mudalabyada iyo adeegayaasha ee baararka iyo makhaayadaha Maraykanka.
Waa maxay shaqada tamarta la cusboonaysiin karo?
Shaqooyinka tamarta dib loo cusboonaysiin karo waxay ka dhigan yihiin baahi shaqaale oo cusub oo ka dhashay maalgelinta dhaqaalaheenna looga beddelayo tamarta kaarboon-ku-xooggan ee yaraynaysa xaalufka kheyraadkeenna dabiiciga ah sarena u qaadaya isticmaalka hufan ee caasimadeenna, kana ilaalinaya noolaha iyo meeraha wasakhda iyo wasakhda.
Shaqooyinka tamarta ma kordhiyaan kharashka tamarta?
Maya. Hagaajinta hufnaanta tamarta, kala duwanaanshaha tamarta iyo doorashada macaamilka ayaa yarayn doonta kharashka tamarta.
Shaqooyinka tamarta ma saamayn doonaan siyaasaddeena ganacsi?
Maya. Sida horumarinta kaabayaasha jirka oo badankeeda, shaqooyin badan oo tamar ah ayaa daruuri ah kuwa maxalliga ah, laakiin u abuurista fursadaha maalgashiyadaas qaran iyo degmo ma xaddido ganacsiga waxayna gebi ahaanba ka duwan tahay siyaasadaha ilaalinta.
Baahida tamarta ayaa ku sii kordheysa adduunka oo dhan iyadoo welwelka ku saabsan cimilada adduunka iyo joogtayntoodu sii kordhayso. Waad buuxin kartaa shardigan.
15 Shaqooyinka Qalin -jabinta Ugu Sarreeya | Dib -u -eegista ugu Fiican
10ka Warbixinnada Dhibcaha Bilaashka ah ee ugu Fiican 2022
Ma rabtaa inaad ogaato qaar ka mid ah kuwa ugu fiican ee bilaashka ah ee shukaansiga goobaha aad kula kulmi karto dad yaab leh? Ama ka sii fiican…